Nyo Twan-Awng | VK
Nyo Twan Awng A real Arakanese revolutionary Want to free from the oppression Arakan country must be free
Company: Arakan Army
All postsNyo's posts
26 Sep at 6:21 am
From World Press Cartoon - Portugal 2020.
Photos by: Lina Cruz
Thanks for the lovely photos you sent it me. It really made me happy.
The exhibition comprises 275 caricatures, editorial cartoons and humorous drawings that make the history of an entire year, from 152 publications from 45 countries, which were selected out of 1000 entries by an international jury that met in February this year.
#WPC2020 #WorldPress #Cartoons #Awards #Portugal
Linkworld press cartoon 2020 | the world cartoonists meeting point worldpresscartoon.net https://worldpresscartoon.net/world-press-cartoon-2020.html
ရခိုင့်တော်လှန်ရီးသမားတစ်ဦးဖြစ်သော "ဦးခိုင်စိုး" ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းလားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဝမ်းနည်းကြောင်း နန့် ဂုဏ်ပြုကြောင်းအောက်မိန့်သဝဏ်လွှာ ပီးပို့ခြင်း
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း(၈) ရက်
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၄) ရက်Expand text…
Original Link: https://bit.ly/2RTmvrN
အဘာ ဦးစံသာလှ (ကွယ်လွန်)နန့် အမင်ဒေါ်အောင်မဦး (ကွယ်လွန်) ၏သားဖြစ်သူ Arakan Communist Party( ACP) ရခိုင်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ဗဟိုကော်မတီဝင် ၊ Arakan National Party (ANP) ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အပါအဝင် ရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရီးတိုက်ပွဲ၊ ရခိုင်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုများထဲတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခသူတစ်ဦးဖြစ်သော "ဦးခိုင်စိုး"သည် အသက်(၈၂) နှစ်အရွယ်တွင် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ မောင်ညိုကျွန်းကျေးရွာရှိ ၎င်း၏ ဇာတိ နီအိမ်၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၂)ရက်နိ၊ နိခင်းသား(၁) နာရီ (၅၀) မိနစ်တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့်ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းလားခကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်၊မင်းပြားမြို့တိုက်ပွဲတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပီးခံခရသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရီးရိုးဂုဏ်ပြည့်ဝပြီး မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝဖြင့် ပီးဆပ်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခသော ရခိုင့်တော်လှန်ရီးသမားတစ်ဦးဖြစ်သော"ဦးခိုင်စိုး"အဂုပိုင် ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းလားရခြင်းအတွက် မိသားစု၊ဆွီမျိုးများနန့်ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါသည်။
ဦးခိုင်စိုးသည် ရခိုင့်တော်လှန်ရီးသမိုင်းထဲတွင် သူ့တာဝန်ကို အကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်နိုင်ခသော သက်ကြီးတော်လှန်ရီးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်အထိ အမျိုးသားရီးတာဝန်များကိုမရပ်မနား တောက်လျှောက်တာဝန်ယူခသောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူအသက်ရှင်သန်နီခသောအချိန်တိုင်းတွင် အမျိုးသားရီးတာဝန်ကိုကျီပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခသောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဦးခိုင်စိုး၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး၌ ကျီပွန်စွာထမ်းရွက်ခသောရခိုင့်အမျိုးသားရီးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် ဖြတ်သန်းမှုများကို ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်မှ ဂုဏ်ပြုယင်း လေးစားအောက်မိန့်စွာဖြင့် ဤသဝဏ်လွှာအား ပီးပို့အပ်ပါသည်။
ရခိုငျ့တျောလှနျရီးသမားတဈဦးဖွဈသော "ဦးခိုငျစိုး" ဘဝတဈပါးသို့ကူးပွောငျးလားခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ဝမျးနညျးကွောငျး နနျ့ ဂုဏျပွုကွောငျးအောကျမိနျ့သဝဏျလှာ ပီးပို့ခွငျး
၁၃၈၂ ခုနှဈ၊ တျောသလငျးလဆနျး(၈) ရကျ
၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ(၂၄) ရကျ
အဘာ ဦးစံသာလှ (ကှယျလှနျ)နနျ့ အမငျဒျေါအောငျမဦး (ကှယျလှနျ) ၏သားဖွဈသူ Arakan Communist Party( ACP) ရခိုငျကှနျမွူနဈပါတီ၊ဗဟိုကျောမတီဝငျ ၊ Arakan National Party (ANP) ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ အပါအဝငျ ရခိုငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရီးတိုကျပှဲ၊ ရခိုငျအမြိုးသားလှုပျရှားမှုမြားထဲတှငျ တကျကွှစှာပါဝငျခသူတဈဦးဖွဈသော "ဦးခိုငျစိုး"သညျ အသကျ(၈၂) နှဈအရှယျတှငျ မွောကျဦးမွို့နယျ၊ မောငျညိုကြှနျးကြေးရှာရှိ ၎င်းငျး၏ ဇာတိ နီအိမျ၌ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ(၂၂)ရကျနိ၊ နိခငျးသား(၁) နာရီ (၅၀) မိနဈတှငျ လူကွီးရောဂါဖွငျ့ဘဝတဈပါးသို့ကူးပွောငျးလားခကွောငျး ကွားသိရပါသညျ။
၁၉၈၆ ခုနှဈ၊ ရခိုငျပွညျ၊မငျးပွားမွို့တိုကျပှဲတှငျ ဦးဆောငျပါဝငျခသူတဈဦးဖွဈပွီး နှဈရှညျထောငျဒဏျ အပွဈပီးခံခရသူတဈဦးဖွဈသညျ။ တျောလှနျရီးရိုးဂုဏျပွညျ့ဝပွီး မြိုးခဈြစိတျဓာတျအပွညျ့အဝဖွငျ့ ပီးဆပျစှနျ့လှတျအနဈနာခံခသော ရခိုငျ့တျောလှနျရီးသမားတဈဦးဖွဈသော"ဦးခိုငျစိုး"အဂုပိုငျ ဘဝတဈပါးသို့ပွောငျးလားရခွငျးအတှကျ မိသားစု၊ဆှီမြိုးမြားနနျ့ထပျတူဝမျးနညျးရပါသညျ။
ဦးခိုငျစိုးသညျ ရခိုငျ့တျောလှနျရီးသမိုငျးထဲတှငျ သူ့တာဝနျကို အကောငျးဆုံးထမျးဆောငျနိုငျခသော သကျကွီးတျောလှနျရီးသမားတဈဦးဖွဈပွီး ကှယျလှနျခြိနျအထိ အမြိုးသားရီးတာဝနျမြားကိုမရပျမနား တောကျလြှောကျတာဝနျယူခသောသူတဈဦးဖွဈသညျ။ သူအသကျရှငျသနျနီခသောအခြိနျတိုငျးတှငျ အမြိုးသားရီးတာဝနျကိုကြီပှနျစှာထမျးဆောငျနိုငျခသောသူတဈဦးဖွဈသညျ။ ဦးခိုငျစိုး၏ဘဝတဈလြှောကျလုံး၌ ကြီပှနျစှာထမျးရှကျခသောရခိုငျ့အမြိုးသားရီးဆိုငျရာမှတျတမျးမြား၊ လုပျဆောငျခကျြမြား နှငျ့ ဖွတျသနျးမှုမြားကို ရက်ခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျမှ ဂုဏျပွုယငျး လေးစားအောကျမိနျ့စှာဖွငျ့ ဤသဝဏျလှာအား ပီးပို့အပျပါသညျ။
Link"ဦးခိုင်စိုး"ဘ၀တစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းလားခြင်းအားဝမ်းနည်းကြောင်းနန့်ဂုဏ်ပြုကြောင်းသ၀ဏ်လွှာပီးပို့ခြင်း bit.ly https://bit.ly/2RTmvrN
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ကူးစက်မြန်ရောဂါ(Covid-19 )စွာ ရခိုင်ပြည်နန့် အောက်သားပြည်မှာ Second Wave "ဒုတိယလှိုင်း"အဖြစ် အားကောင်းမောင်းသန်ကူးစက်ပျံ့နှံ့လို့ဟိနီရေ။Expand text… ဒုတိယလှိုင်းမှာ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့နှုန်းစွာရေ ပထမလှိုင်းကာလအတွင်းမှာပျံနှံ့နှုန်းထက် ဆယ်ဆနီးပါးပိုမြန်ရေ။ ပြင်းအားကတော့ စကေလျော့လားပုံပေါက်တေ။ ယကေလေ့ တစိချေတောင်မှမပေါ့ဖို့လိုရေ။
ပထမလှိုင်း ကာလ(၉ လအတွင်း)မှာတော့ ကိုရိုနာစွာ ရခိုင်သားတိနန့် ဖူးစာကောင်းမဆုံလီခ။ လက်ချိုးရီတွက်လို့ရရေကိန်းဂဏန်းသာသာ၊ တစ်ရာအောက်လောက်ရာဟိခရေ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်မှာစဖြစ်ခတေကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါစွာ ရခိုင်မြီကို (၅) လကျော်အကြာ၊မေလ(၁၈) ရက်နိမှာမှ စရောက်တေ။(Arakan Case-188) ငပလီ-သံတွဲဖက်ကနီစလို့ဝင်လာရေ။ ပြီးကေ တောင်ကုတ်။ ယင်းကနီ အခြားမြို့တိကိုကျော်ပြီးကေဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဖက်ကိုရောက်လားရေ။
ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာ ကိုရိုနာကူးစက်ခံရလူအရီအတွက်စွာ မေလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ သုံးလပေါင်းမှ(၂၁) ယောက်ရာဟိခတေ။ ကူးစက်ခံရေရေလူတိလေ့ အသီအပျောက်မဟိခဘဲ အားလုံးသက်သာပျောက်ကင်းလားခတေ။ ကိုဗစ် ပထမလှိုင်း( Covid 19 First Wave)နန့် အာရက္ခတိုင်းပြည်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကအေလောက်ရာဟိခတေ။ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလူနာတစ်ယောက် ကိုယ့်လောင်းကိုယ်လှော်ပနာ PPE ဝတ်လို့ဆီးရုံလားခရေ တောင်ကုတ်ဖက်ကမြင်ကွင်းစွာပထမကိုဗစ်ကာလ ကမ္ဘာကျော်ပြကွက်ဖြစ်ခတေ။
(၂) ဒုတိယလှိုင်း( Arakan Case-375)
ဒုတိယလှိုင်းမှာ ကူးစက်ပုံကတော့ အရင်ထက်ပြင်းရေ။ သြဂုတ်(၁၆) ရက် (Arakan Case-375) ကနိန် စက်တင်ဘာလ(၁၆) ရက်၊မိုးထ(၈)နာရီတစ်လတာအတွင်း ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာ(၇၇၂)ယောက်အထိကူးစက်ခံထားရပြီးဗျာယ်။ ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုအစကနီအေနိအထိတော့ ရခိုင်ပြည်မှာစုစုပေါင်း (၇၉၃) ယောက်အကူးစက်ခံထားရပြီးကေ ရခိုင်ပြည်၏ မြို့တိုင်းလိုလိုမှာပိုးတွိလူနာဟိထားပြီးဗျာယ်ဖြစ်တေ။ ဆိုခါ,ကိုဗစ်စွာစရိတ်ငြိမ်းနန့်ရခိုင်ပြည်ကိုတစ်ပတ်ပတ်ထားပြီးဗျာယ်။ (ကိန်းကဏန်းတိက စကေတဗွေလွဲနိုင်ရေ)
ကိုဗစ်စွာစစ်တွေသို့ရောက်နီရေလူတိကိုတော့ ပိုခြီပုံပေါက်တေ။ ယင်းမြို့မှာကူးစက်နှုန်းအရီအတွက်ပိုများစွာတွိလို့။ စကူးခံမြို့နန့်မြို့ကြီးလို့လေ့ကူးစက်ပျံနှံ့ဖို့များရေ။ဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနန့် ကိုဗစ်စဖြစ်ရေအချိန်ကနီအေနိအထိ(စက်တင်ဘာလ-၁၆)ပိုးတွိလူစုစုပေါင်း(၃၆၃၆) ယောက်ဟိခဗျာယ်။ ယင်းအထဲမှာ (၈၃၂) ယောက်ကိုဗစ်ပိုးကင်းစင်ခပြီးဗျာယ်။ ကုသလို့ပျောက်ကင်းလားခဗျာယ်။ ကိုဗစ်ပိုးရဲ့အထွက်မှာအသက်ပါယူလားခြင်းခံရရေလူကတော့ ယင်းစုစုပေါင်း(၃၆၃၆)အထဲမှာ (၃၉) ယောက်။ သီလူ။
(၃) D614G- ဒုတိယလှိုင်းအစ Akyab က
ပထမလှိုင်းထဲက ကိုဗစ်စွာ ဒုတိယလှိုင်းအစမှာသူ့ပုံစံကိုစကေတဗွေရုပ်ပြောင်းထားပုံပေါက်တေ။ ရခိုင်သားတိအတွက်ကိုဗစ်စွာနဂိုရုပ်ကိုဖျက်လို့ လာခပုံပေါက်တေ။ အေဂုကူးစက်နီရေ ရောဂါပိုးကိုစုံစမ်းစစ်ဆီးပြီးရေအချိန်မှာ အေနိုင်ငံထဲမှာ"ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းအစ အတ်ကြပ် Akyab က" လို့ပြောလို့ရဖို့ထင်ရေ။
ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ပေါ်နီရေနိုင်ငံတိထဲမှာ လည်း G614 ဗီဇပြောင်း(ပုံပြောင်း) ပိုးတိကိုတွိရေ။ Akyab=စစ်တွေမြို့စွာ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းအစဖြစ်စွာကို လီယာဉ်စီးခရီးသည်ငါးထောင်ကျော်ကို ကျန်းမာရီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပနာ အတည်ပြုပီးထားရေ။ (အခြားပြည်နယ်/တိုင်းတိအတွက်ထုတ်ပြန်ထားစွာမတွိရ)။ ယပြီးကေ,ညမထွက်ရအမိန့်ရခိုင် တပြည်လုံးထုတ်ပနာ ထပ်ဆင့်အတည်ပြုပီးထားရေ။ ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်လားလာခွင့်မှာ ရခိုင်ပြည်ကို လူမျိုးရီးအမုန်းတရားနန့်တစ်ဖက်သတ် ကန့်သတ်ထားပနာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း တတိယံမိအတည်ပြုပီးရေ။
Coronavirus 2019 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ၂၀၁၉ ကြောင့်ဖြစ်တေ အေကူးစက်မြန်ရောဂါစွာ လူကနီလူကိုကူးစက်တတ်တေရောဂါဖြစ်တေ။ အဂုအချိန်မှာကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံနီးပါးကိုကူးစက်ပျံ့နှံရောက်ဟိလားခဗျာယ်ဖြစ်တေ။ "ကိုရိုနာအစ ဝူဟန်က" ဆိုရေပယှောင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဝူဟန်မြို့ကစတင်ဖြစ်ပွားခပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးသို့ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ကူးစက်ပျံနှံ့ရောက်ဟိလားခတေ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရီးအဖွဲ့ WHO က ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ(၁၁) ရက်နိမှာကြေညာခတေ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)စွာ မှို့တိလီမှာလွင့်ရေပိုင်, တိမ်တိအာကာမှာလွင့်နီပိုင် လားနီပြီးကေ သူ့တာဝန်ကိုသူကျီပွန်စွာထမ်းလို့ဟိရေ။ ဝင်ချင်လူခန္ဓာဝင်ပြီး မဝင်ချင်လူခန္ဓာမဝင်စွာက ကိုဗစ်လကျင့်မကောင်းလို့ပြောရဖို့။သူ့အလုပ်က သူလားရာလမ်းမှာတွိရေလူတိရဲ့ နှာခေါင်း၊ ပါးဇပ် လမ်းကြောင်းတိကနီတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ပြီးကေ ယင်းလူခန္ဓာမှာနားခိုပြီးကေ ယင်းလူရဲ့ ကျန်းမာရီးနဂိုအခံကို စမ်းသပ်လီရေ။ ခုခံအားမကောင်း၊ နဂိုယိုယွင်းပျက်စီးနီရေ ကျန်းမာရီးပုံစံနန့်ဆိုကေတော့ ကိုရိုနာက နှိပ်စက်လီဗျာယ်။
ကိုဗစ်စွာ သူခေတ္တတည်းခိုနီရေလူ့ခန္ဓာရဲ့ နှာခေါင်းကောင်း/မကောင်းစစ်ဆီးရေ။ အနံ့မရလိုက်ဗျာယ်ဆိုစွာနန့် သူ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ဗျာယ်။ ဆီးချိုသမားတိကတော့ အနှိပ်စက်အခံရဆုံး။ယေဇု Mask တပ်ကတ်။ လက်ဆီးကတ်။ကိုဗစ်နန့်ပတ်သက်လို့လိုက်နာရဖို့စည်းကမ်းတိကိုတိတိကျကျလိုက်နာကတ်။ အလိဇီထိုးပနာ မနီကတ်ကေ့။ မပေါ့ကတ်ကေ့။
(၄) ဒုတိယ ကိုယ်စောင့်နတ်သား/နတ်သမီး
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ(၂၂) ရက်နိ BBC ကသိပ္ပံနန့်နည်းပညာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ Scientific Advisory Group fo Emergencies (Sage) အဖွဲ့က ကိုဗစ်နိုင်းတင်းကို ရာသက်ပန် Covid လို့တောင်ပြောထားရေ။ ဒေကမ္ဘာမြီထက်မှာ လောလောဆယ် ဗြုန်းခနဲပျောက်လားဖို့မဖြစ်နိုင်သိမ့်လတ်။ ကိုဗစ်ပုံစံပြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနန့် (သို့မဟုတ်) အခြားပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနန့်တည်ဟိနီနိုင်ရေ။ဆိုလိုစွာက,ဒုတိယ ကိုယ်စောင့်နတ်သား/နတ်သမီးပယှောင်ဟိနီလီဖို့လို့ဆိုလိုစွာထင်ရေ။
အေအချိန်မှာ Covid-19 (G614) စွာ"အချိန်မရွီးမင်းလည်းကူးစက်ခံရနိုင်ရေ။ ငါလည်းကူးစက်လားနိုင်ရေ" ဆိုရေသတိတရားနန့်သတိထားပြီးနီထိုင်ကတ်ဖို့လိုရေ။ New Normal life ဆိုရေ "ခေတ်သစ်လူမှုဘဝသစ်"မှာ ချစ်သူခင်သူတိနန့်ပြန်ဆုံဖို့၊ အာရက္ခတိုင်းပြည်ပြန်ဖြစ်လာဖို့က ကိုဗစ်ကာလမှာ ရခိုင်တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအပေါ်မှာမူတည်နီရေ။ တစ်ဖက်မှာ ရခိုင်သားတိအာရက္ခတိုင်းပြည်နန့်ထိုက်တန်လားဆိုရေ စမ်းသပ်မှုမယ်သယ်လားလို့ တွေးမိရေ။
(၅)Stay At Home (ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နီကတ်ပါ)
COVID-19 (SARS-CoV/2) ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်၊ ပိုးတွိသူစာရင်းကို ကျန်းမာရီးနန့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနိတိုင်းထုတ်ပြန်လို့ဟိရေ။ ကူးစက်နှုန်းမလျော့သိမ့်။ ထပ်လို့ပျံနှံ့နီဆဲ။ -Comment တွင်အဆ
16 Sep at 5:27 am
အေဂု,တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတိရဲ့ စကေတာကပ်တေလှုပ်ရှားမှုတိကိုတွိလာရလို့ လွန်ခရေ (၆) နှစ်ကျော်က ရက္ခိုင့်အောင်လံ စာစောင်မှာ ဆောင်းပါးရှင် လှထွီးချေ(ပလက်ဝ) ရီးရေ Sticker Revolution စတေကာတော်လှန်ရီး ကို သတိရမိလို့ ပြန်အတွက်ဖော်ပီးလိုက်တေ။Expand text…
ရက္ခိုင့်အောင်လံ စာစောင်မထုတ်စွာ လေး၊ငါး နှစ်ရှိဗျာယ်။ အဂု အေစာစောင်ကို ပြန်လို့ အသက်သွင်းပနာ ပြန်ထုတ်ဖို့လုပ်နီပါရေ။
စာပီ၊ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ ပန်းချီ ဆရာသမားရို့ အားပီးလို့ရပါရေ။ စာမူဖိတ်ခေါ်ရေ စာကို ပြန်တင်ပီးပ့မယ်။
Covid Second Wave မှာ ငြိမ့်ငြိမ့်ချေ စီးလို့ ကိုယ်တိုင်ထုဆစ်ထားရေ စာမူတိနန့် တော်လှန်ရီးခရီးရှည်အတွက် ခွန်အားဖြစ်စီရေစာတိနန့်စာပီ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါယင့်။
စာမူတိဟိကေ ဇာသို့ပို့ပီးရဖို့ ထပ်ပြောပါမယ်။
လောလောဆယ်, အဂု လုပ်နီရေ ရက္ခိုင့်အောင်လံ စာစောင်, Arakan Flag Bulletin အတွက်"စတေကာတော်လှန်ရီး(၂)"ဆိုရေ ဂေါင်းစဉ်နန့် စာမူတိဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါယင့်။
Photo Credit; ဓာတ်ပုံမူရင်းတင်သူ၊ သတင်းဌာနများကို ခရက်ဒစ်ပီးပါရေ။
ခင်ဗျားရို့ပျော်ကြီးကျပနာမဲဆွယ်နီကတ်တေအချိန်မှာ ညောင်ကန်ရွာထဲကိုနယ်ချဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တိလက်နက်ကြီးနန့်ပစ်လို့ ငါရို့အမျိုး(အချေတိ၊ဆရာမတိ၊ရွာသား)အသက်တိဆုံးယှုံးခရပြန်ဗျာယ်။
ခင်ဗျားရို့ နောက်ထပ်အာဏာဆက်ဖို့အတွက်ရခိုင်တိကိုထပ်သတ်ပနာExpand text… သွီးလမ်းခင်းနီကတ်တေအချိန် ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တိသွီးမြီထပ်ကျပြန်ဗျာယ်။
အေပိုင်နာကျည်းမှုတိကို "အား"အဖြစ်ပုံပြောင်းလို့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရီးတိုက်ပွဲ၏အဆုံးအဖြတ်ကာလအတွက်ရာသိမ်းထားလိုက်မယ်။
ခငျဗြားရို့ပြျောကွီးကပြနာမဲဆှယျနီကတျတအေခြိနျမှာ ညောငျကနျရှာထဲကိုနယျခြဲ့စဈရာဇဝတျကောငျတိလကျနကျကွီးနနျ့ပဈလို့ ငါရို့အမြိုး(အခတြေိ၊ဆရာမတိ၊ရှာသား)အသကျတိဆုံးယှုံးခရပွနျဗြာယျ။
ခငျဗြားရို့ နောကျထပျအာဏာဆကျဖို့အတှကျရခိုငျတိကိုထပျသတျပနာ သှီးလမျးခငျးနီကတျတအေခြိနျ ရခိုငျပွညျမှာရခိုငျတိသှီးမွီထပျကပြွနျဗြာယျ။
အပေိုငျနာကညျြးမှုတိကို "အား"အဖွဈပုံပွောငျးလို့ အမြိုးသားလှတျမွောကျရီးတိုကျပှဲ၏အဆုံးအဖွတျကာလအတှကျရာသိမျးထားလိုကျမယျ။